अवकाशप्राप्त एक सैनिकको कथामा निर्माण भएको ‘शेरबहादुर’ को फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘शेरबहादुर’ माघ १९ मा
सन्की स्वभावको मूल पात्रमा आधारित रही बनाइएको फिल्म ‘शेरबहादुर’ माघ १९ मा रिलिज मिति निश्चित गरी पोस्ट प्रोडक्सनमा धमाधम लागेको छ ।
“रुदाने” को फस्टलुक
थाहा अभियन्ता तथा राजनीतिज्ञ रूपचन्द्र विष्टको जीवनीमा आधारित फिल्म ‘रुदाने : विद्रोहको नेपाली नाम’ को फस्टलुक पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘रुद्र’ को फस्टलुक
निखिल उप्रेती स्टारर ‘रुद्र’ को रिलिज मिति साविकको प्रदर्शन मितिभन्दा एक साताअघि साउन १३ मा पक्का भएको छ । निखिलको होम प्रोडक्सन ‘रुद्र’ को मुख्य भूमिकामा उनी आफैं छन् । नयाँ रिलिज मितिसँगै फिल्मको फस्टलुकसमेत आएको छ ।
‘भुइँमान्छे’ को फस्टलुक
दैनिक अस्पतालमा पोस्टमार्टम गर्ने मान्छेको जीवन कस्तो हुन्छ ? उसलाई समाजले कसरी हेरेको हुन्छ ? उसको मनोविज्ञान कस्तो होला ? यिनै कुराहरू समेटिएको फिल्म ‘भुइँमान्छे’ को गीत र फस्टलुक (टिजर) सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साउन २० बाट फिल्म रिलिज हुनेसमेत फिल्म युनिटले घोषणा गरेको हो ।
‘हिटलर’ को फस्टलुक
‘हिटलर’ को फस्टलुक पोस्टर सोमबार सार्वजनिक भएको छ । जेठ १२ मा रिलिज गरिने फिल्म सौरभ ढकालले निर्देशन गरेका हुन् ।
‘अग्निदहन’ को फस्टलुक
फिल्म ‘अग्निदहन’ को फस्ट लुक पोस्टर र टिजर सार्वजनिक भएको छ । बुधबार राजधानीको क्युज सिनेमा हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्माण पक्षले फिल्मको टिजर र पोस्टर सार्वजनिक गरेको हो ।